CryptoPrice, rindranasa vaovao ho an'ireo manana kryptocurrency | Avy amin'ny mac aho
CryptoPrice, fampiharana vaovao ho an'ireo izay manana crypto
Ao amin'ny magazay Mac App no ​​ahitantsika ny karazana fampiharana sy ireo izay tsy noforonina. Ity no tranga misy fampiharana vitsivitsy izay mifantoka mivantana amin'ny vola nomerika, CryptoPrice dia rindranasa vaovao ahafahantsika manana ivon'ny vidin'ny volantsika nomerika.
Azo antoka fa maro aminareo no tsy manana an'io karazana vola io na mampiasa azy io amin'ny fivezivezena ara-bola, saingy mihamaro ny mpampiasa mampiasa an'io karazana "vola elektronika" ary ny fampiharana toa an'ity dia mety ho tena ilaina ho azy ireo
Ny zavatra voalohany dia zava-dehibe hahafantarana hoe inona ny cryptocurrency na crypto. Noho izany andao mankany amin'ny wikipedia ary manome fanazavana mazava sy mazava tsara momba izany karazana vola izany izy ireo:
Cryptocurrency na cryptocurrency (amin'ny anglisy cryptocurrency) dia fampitaovana nomerika fifanakalozana. Ny cryptocurrency voalohany nanomboka varotra dia Bitcoin tamin'ny 2009,Ary nanomboka tamin'izay dia maro ny hafa nipoitra, miaraka amin'ny toetra sy fanao samihafa toy ny Litecoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin, sns ...
Ny zava-dehibe amin'ity rindranasa vaovao ity dia ny ahafahan'ny mpampiasa mahita ny vidin'ny tsirairay amin'ireto vola ireto amin'ny alàlan'ny tsindry tokana amin'ny kisary. Afaka mahita vola crypto mihoatra ny 1600 crypto isika ary vola nasionaly 95 ho an'ny fampitahana mora foana. Ny zava-dehibe dia ny fanavaozana amin'izao fotoana izao ary raha avelantsika any aoriana ny fampiharana dia hitohy handrefy ny fanovana ary hampihatra azy ireo mivantana, noho izany rehefa mitsidika ny rindranasa indray ny mpampiasa avy amin'ny tsipika fitadiavana dia hahazo ny sanda nohavaozina izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Mac App Store » CryptoPrice, fampiharana vaovao ho an'ireo izay manana crypto
Ahoana ny fomba fampidinana sary amin'ny Instagram avy amin'ny Mac mampiasa Safari